नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हामी कता जाँदै छौं ???!!! : काठमाण्डौको लागि खाधान्न, तरकारी र पेटोलियम पदार्थको आपुर्तिमा समेत रोक लगाउने रे अब !
हामी कता जाँदै छौं ???!!! : काठमाण्डौको लागि खाधान्न, तरकारी र पेटोलियम पदार्थको आपुर्तिमा समेत रोक लगाउने रे अब !
बिशालटार, बेनिघाट, सलाङघाट, मलेखु, गजुरी र आदमघाट लगायतका पृथ्बी राजमार्ग वरपर बस्ने बासिन्दाहरुले जातीय राज्यको बिरोध गर्दै मर्स्याङ्दी तथा कालीगण्डकीबाट काठमाण्डौ लगिएको बिद्युत प्रशारण लाइन काटिदिने भएका छन । उनीहरुको भनाई छ, राजधानीलाई नेवा: जाती बिशेषको राज्य बनाइन्छ भनें बिद्युत पनि नेवा: राज्यमैं उत्पादन गरेर बत्ति बालुन । स्थानीय बासिन्दाहरुले काठमाण्डौको लागि खाद्यान्न, तरकारी र पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिमा समेत रोक लगाउने भएका छन.........................!!! उनिहरुले एक भब्य भेला मार्फत यस्तो निर्णय गरेर जातिय राज्य माग्ने हरुलाई चेत आओस भनेर यस्तो गर्न लागेको बताए , हामी कता जाँदै छौं ???!!!